Tokony Hankalaza Fety ve Isika? | Ampianarina
TSY avy ao amin’ny Baiboly ny fety ara-pivavahana sy fety hafa fanaon’ny olona any amin’ny tany maro. Avy aiza àry no niandohan’izy ireny? Raha afaka manao fikarohana any amin’ny fitehirizam-boky ianao, dia jereo ny momba an’ireo fety ankalazain’ny olona any aminareo, anisan’izany ireto:
Paka. “Tsy miresaka momba ny fankalazana ny Paka ny Testamenta Vaovao”, hoy Ny Rakipahalalana Britannica. Ahoana àry no niandohan’ny Paka? Fanaon’ny mpanompo sampy ny fombafomba fanao amin’izy io. Lazaina fa entina hahatsiarovana ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty io fety io, nefa tsy fanaon’ny Kristianina ny fombafomba fanao amin’ilay izy. Hoy, ohatra, Ny Rakipahalalana Katolika (anglisy), momba ny “bitron’ny Paka”: “Marika efa fampiasan’ny mpanompo sampy ny bitro, mba ho famantarana ny fiterahana maro.”
Taom-baovao. Samy manana ny daty sy ny fomba ankalazany ny Taom-baovao ny firenena eran-tany. Ahoana no niandohan’izy io? Hoy Ny Rakipahalalan’izao Tontolo Izao: “Ny 1 Janoary no nataon’i Jules César, mpitondra romanina, ho Taom-baovao tamin’ny taona 46 T.K. Natokan’ny Romanina ho an’i Janus, andriamanitry ny vavahady sy ny varavarana ary ny fiandohana, io andro io. Avy amin’ny anaran’i Janus ny anaran’ny volana Janoary. Nanana tarehy roa i Janus, ka ny iray nitodika tany aloha ary ny iray nitodika tany aoriana.” Avy amin’ny fombafomban’ny mpanompo sampy àry ny fankalazana Taom-baovao.
Halloween sy fetin’ny maty. Hoy Ny Rakipahalalana Amerikanina: “Ny fombafomba sasany arahina amin’ny Halloween, dia efa fahita tamin’ny fety [nataon’ny mpisorona selta] talohan’ny andro kristianina. Nanao fety ho an’ny andriamanitra roa lehibe izy ireo. Ho an’ny andriamanitra masoandro ny iray, ary ny iray ho an’ny andriamanitry ny maty ..., izay nankalazaina ny 1 Novambra, fiandohan’ny Taom-baovaon’ny Selta. Nampidirina tsikelikely tao amin’ny fanaon’ny Kristianina ny fetin’ny maty tatỳ aoriana.”
Fety hafa. Tsy ho voaresaka eto daholo ny fety fanaon’ny olona eran-tany. Tsy ankasitrahan’i Jehovah anefa izay fety manindrahindra olona na fikambanan’olombelona. (Jeremia 17:5-7; Asan’ny Apostoly 10:25, 26) Mila jerena koa ny niandohan’ny fety ara-pivavahana, satria miankina amin’izay no ahitana raha mampifaly an’Andriamanitra ilay izy na tsia. (Isaia 52:11; Apokalypsy 18:4) Ary ny fety tsy ara-pivavahana? Misy toro lalana ara-baiboly ao amin’ny Toko faha-16 amin’ity boky ity, ahitana raha ankasitrahan’Andriamanitra ny fety iray na tsia.